Izmir Folding Bikeji Chishandiso | RayHaber
mushaTURKEYTurkish Aegean Coast35 Izmirİzmir Folding Bikeji Chishandiso
02 / 12 / 2019 35 Izmir, Turkish Aegean Coast, GENERAL, HIGHWAY, Tire Wheel Systems, TURKEY
izmir kupeta bhasikoro application
Nekushandisa nyowani kweIzimir Metropolitan Municipality, zvichave zvichigona kufamba pamabhazi emunharaunda aine mabhasikoro ekupeta mune dzimwe nguva.
Metropolitan Municipality, iyo yakasaina mapurojekiti akakosha ekuita İzmir "bhasiketi guta ,, iri kutanga chirongwa nyowani." Iyo 26 application, iyo yakapinda musimba muna Nyamavhuvhu, inokutendera kuti ufambe mumabhazi eruzhinji nekupeta mabhasikoro pane dzimwe nguva.
Izmir Metropolitan Municipality inobvisa zvipingamupinyi zvevanhu vanofamba nemabhasikoro kuti vabatsirwe nezvifambiso zvevanhu vese rimwe nerimwe kuti vakurudzire uye kukurudzira kushandiswa kwemabhasiketi muguta. Mukati merongero yesarudzo yakatorwa neESHOT General Directorate, vashandisi vebhasikoro, 26 Kubva muna Nyamavhuvhu 2019 zuva, zvinokwanisika kuti ubatsirwe nebasa rekufambisa veruzhinji nekupeta mabhasiketi mune dzimwe nguva nzvimbo.
Saizvozvo, mabhazi eguta anogona kukwira mumavhiki uye kuzororo revanhu neruzhinji rakapetwa mukati mevhiki pakati pe09.00-16.00 ne21.00-06.00 maawa.
Izmir Metropolitan Municipality mumakore achangopfuura nehurongwa hwakaitwa neyekutakura njanji pamwe nekufambisa kwegungwa zvakapa mukana kune vakatasva mabhasikoro, mamwe mabhazi akaisa zvakakosha zvekutakura mabhasiketi asina-kupeta.
Samputa guta mukufambisa bhasikoro
İzmir Metropolitan Municipality, iyo yakatendeukira kumafambisirwo ezvekufambisa kwezvakatipotera kuti iwane mhinduro kumagetsi ekushomeka uye kuti ibatsire mukubuda kwenhamo yemamiriro ekunze, iri kuita mabasa akakosha kuitira kusimudzira kushandiswa kwemabhasiketi muguta. Kushandiswa kwemabhasikoro kwakawedzera pamwe nekuunzwa kwenzira dzemabhasikoro uye bhasikoro yekurejesa system İS BİSİM Kent kuguta yakawana kukurumidza apo İzmir Meya weTiç Soyer vaiwanzofarira kufambisa mabhasiketi mukufambisa kwemadhorobha panzvimbo yemasimba masimba. Izmir Metropolitan Municipality inoronga kuwedzera nzira iripo yemabhasiketi muguta kuenda kumamiromita e2030 ne453, kupa mukana wekupinda mukati memaguta nemabhasiketi uye kuwedzera kuwanikwa kwezviteshi zvebhasiketi kune enjanji system network uye nzvimbo dzekufambisa. Izmir, EU-mari "Uya Turkey Bike" chirongwa akasarudzwa sapiyona muguta.
Sakarya Smart Bhasikoro Yekushandisa 15 is at akasiyana Points…
Nzira dzeBhasiketi Kubva kuZuva
300 Yakasvitswa panguva Yakavhurwa Ceremony yeBhasikiti Island…
Great Mukana E-Bike Bicycle Industry muTurkey
Chengeta Paunofamba MuIzmir
İzmir yakaverengerwa muEuropean cycling Network…
Target yekupararira kweBhikicha muIzmir 2040
IYimir Metropolitan Municipality 'Zuva reBhasikoro' Kukokwa
"Zuva Rokufambisa Ngara" Rinopemberedzwa neJoy muIzmir
Nhamba yeVatengi veChechi muIzmir Ichagadziriswa
Izmir inosanganisirwa muEuropean Bicycle Route Network